Naphezu kokuba eziningi lula futhi izinguquko yesistimu yokusebenza Windows, it has ethile eyodwa enkulu. Ukuze enembile, sikhuluma ukuchayeka sohlelo yokuhlasela amagciwane ezinhlobo ezehlukene nemvelaphi. Ake sixoxe ngalokho a virus ukuqalisa kukhona, indlela abenza ngayo, imuphi umonakalo kungabangela ikhompyutha yakho, futhi kanjani ukubhekana nazo.
Uqala ukuqaphela ukuthi yiqhwa kukhompyutha yakho yaqala cishe ngokushesha ngemva kokuba edlulisa izivivinyo BIOS? Izikhathi eziningana ukuze faka uhlelo noma ukufometha idrayivu kanzima, kodwa awuboni noma yiziphi izinguquko ezinhle? Qaphela, ngoba - inhlabamkhosi kuqala, okubonisa ukuthi ikhompyutha wazinza okubizwa ngokuthi i-boot amagciwane.
sici ngokuyinhloko endaweni ethintekile. Amagciwane yalolu hlobo ushaye disk ukuqalisa wemboni. Futhi inkumbulo ngisho nangaphambi kokuba ufake Uhlelo unqulo wesi arab. Yingakho ukuthola kubo ngaphakathi, avame kungaba nzima impela.
Boot amagciwane musa njalo baphathe umsebenzi elimazayo. Nokho, ngisho Kulokhu, iyingozi kakhulu. Kungani? Kulula kabi. Amaphutha izinhlelo bangaba imbangela yesistimu yokusebenza engazinzile, ungalahlekelwa idatha eningi ebalulekile egcinwe kumemori ikhompyutha. Ukulungiselelwa "non-lwendabuko" uhlelo ngokuvamile zinganikeza imiphumela ezingalindelekile.
Qinisekisa khona igciwane ukuqalisa ungakwazi ukulandelela izingwegwe uphazamisa zithwala ukuqondisa imithwalo yesistimu yokusebenza. Ngo inqubo ngokudlulisela ukulawula kurekhodi master boot wemboni (MBR) zonke iphazamisa ziphathwa kuphela ukubamba iqhaza BIOS. Lokhu kwehlisa kakhulu ibanga lamakheli. Boot igciwane ngandlela-thile kuyokwenza ukubamba ezinye kokuphazamiseka, ngoba iyiphi i-akhawunti uzokwazi ukusebenza. Ngokuvamile, inhlanganisela kuhlanganisa 13h (disk), 8h noma 1 IziKr (timer), 9h (ikhibhodi), 12h (usayizi inkumbulo), 21h (MS DOS), 17h (iphrinta). Kancane ekushintsheni bootloader, ungakwazi abaziboni lezi zicupho, okungukuthi ukuthola khona amagciwane.
Uma isikhathi awayiboni ukuthi kukhompyutha ithole ebhuthini amagciwane, ungahle uhlangabezane nezinkinga ezinkulu, ubuncane zazo - isidingo faka uhlelo emva yokuhlanza kanye ukufometha hard drive. Ezimweni ezinzima ngokukhethekile, kungenzeka kabusha ukufakwa kohlelo kungase kungabi.
Izinhlelo ezivimbayo futhi Ukwelashwa nokuvikelwa computer amagciwane Kwenziwa ngosizo amathuluzi akhethekile. Ngokwesibonelo, ngokumelene ukuqalisa amagciwane bazibonakalisa ngokuphelele Uhlelo Norton Disk Doctor ( "Norton Disk Doctor"). Yini enye ongayenza?
1. Nqamula idrayivu kanzima kusukela PC yakho bese uxhuma kwenye ikhompyutha ne -Antivirus olufakiwe (kungakuhle ukuthi kwaba uhlelo eliphezulu ilayisensi). Ngemva kokuhlola drive kanzima kanye nokwelashwa amagciwane Kutholwe usuphothuliwe, ungakwazi uphinde uxhume idrayivu kanzima kwikhompyutha yakho.
2. Engeza umsebenzi BIOS ukuqalisa CD ke ivuleke ikhompyutha yakho usebenzisa kakade disk "eziphuthumayo". On the idrayivu kumelwe ithwale i-software unqulo wesi arab, kanye base fresh kuso.
3. Thola uyakwazi lobuchwepheshe ikhumbula izici ze-software yakho ngesandla isula ukuqalisa wemboni. Le nqubo - a eside futhi kukhathaza, kodwa ngo-100% ngempumelelo.
Analog "Siri" ukuze "Android": Ukubukeza umsizi izwi
Indlela ukushintsha umbala wamehlo ku-Photoshop: imfundo Wabasaqalayo
Emanuel Ginobili. biography
Ngubani ziyanuka ibhungane futhi kungani kuba iphunga elibi kangaka?
The main izisusa lyric Nekrasov
Izimpethu umuntu - inganekwane noma ngokoqobo ezimbi?